Smartling: Adeegyada Tarjumaadda, Wadashaqaynta, iyo Nidaamka Qalabaynta Barnaamijka | Martech Zone
Haddii ganacsiga ay wadaan ereyo, ganacsiga adduunka waxaa sii hurinaya tarjumaadda. Badhamada, gaadhigii wax iibsiga, iyo nuqul jacayl ah. Websaydhyada, emayllada, iyo foomamka waa in lagu turjumaa luqado kala duwan si ay summaddu u noqoto mid caalami ah oo ay u gaadho dhagaystayaasha cusub.
Tani waxay qaadataa kooxo dad ah oo si taxaddar leh u maareeya kanaal kasta oo wax lagu qaybinayo oo ku saabsan waxyaabaha laga helayo; waana ku mamnuuc kooxaha inay wax ka qabtaan luuqad kasta oo la taageero. Gali: Smartling, Nidaamka maaraynta tarjumaadda iyo adeeg bixiyaha luqadda oo awood u siinaya astaamo leh aaladaha lagu ogaanayo waxyaabaha ku jira aaladaha iyo aaladaha kale. Smartling's Enterprise Translation Translation, oo ah dariiqa xogta lagu socodsiinayo maxalliga ah, ayaa u oggolaanaysa macaamiisheeda inay gaaraan tarjumaadaha ugu tayada sarreeya qiime jaban oo hooseeya.
Smartling waa barta tarjumaadda xulashada boqolaal magac, oo ay ku jiraan Hootsuite, InterContinental Hotels Group, Sprout Social, GoPro, Shopify, NextDoor, Slack, iyo SurveyMonkey.
Maxaa Ka Duwan Smartling?
Dejinta xogta ku saleysan - Smartling maahan oo kaliya in macaamiisha ay u soo gudbiso xogta waqtiga dhabta ah ee ku saabsan hanaanka tarjumaadooda, laakiin sidoo kale waa caqli ku filan in go'aano loogu sameeyo iyaga.
qalabaynta - Horumariyayaashu lama heli karo laakiin tarjumaadaha waa in la sameeyaa. Smartling wuxuu si aan kala go 'lahayn ugu xiraa macaamiisha' CMS, keydka koodhka, iyo aaladaha otomatiga suuq geynta si loo yareeyo culeyska deegaanka.
Macnaha guud - Turjumaanada waa inay ku arkaan ereyada macnaha guud si ay u gaarsiiyaan shaqo tayo sare leh. La'aanteed, waaya-aragnimada isticmaale-dhamaadka ayaa dhibaysa. Smartling ee interface turjumaad awood u turjumaan kasta si ay u fahmaan mashruuca dhow dahay.
Tarjumaadda Mashiinka Smartling (MT)
Shaqo kasta uma baahna turjumaan aadanaha. Marka ay timaado tarjumida ereyada miisaanka, tarjumaada mashiinka waa tan ugu dhaqsaha badan uguna qaalisan. Smartling waxay kuxirantahay matoorada MT ee ugu awooda badan uguna casrisan, oo ay kujiraan Amazon Translate, Google Translate, Microsoft Translator, Watson Language Translator, iyo inbadan, si dadka looga caawiyo inay helaan adeegga MT ee saxda ah baahidooda gaarka ah. Smartling wuxuu kaloo ka faa'iideysanayaa tarjumaadda mashiinka neerfaha si uu ula jaan qaado tarjumaadaha nuxurka nooc kasta oo ka mid ah codkiisa gaarka ah iyo dhawaqiisa waqtiga.
Adeegyada Luqadda Smartling
Adeegyada Tarjumaadda ee Smartling waxay tarjumaysaa in ka badan 318 milyan oo eray sanad walba iyadoo ka tarjumeysa 150 luqadood. Shirkaddu waxay gacan ka geysaneysaa turxaan bixinta safarka macaamiisha ee ku teedsan 50 meel ganacsi oo kala duwan. Smartling waxay shaqeysaa habraac adag oo kala shaandheyn ah, iyadoo kaliya 5% codsadayaasha ay soo marto, iyadoo hubineysa in shirkadda ay ka faa'iideysaneyso kaliya turjubaannada ugu fiican adduunka. Ama, haddii aad leedahay tarjumaanno kuu gaar ah, waxaad si fudud ugu dari kartaa iyaga barnaamijka 'Smartling platform' iyo turjubaannadaada shaqada.
Adoo qaadaya hab guud oo ah kharash-kaydinta, Adeegyada Luqadda Smartling waxay sifiican uga gudubtaa sicirka eray kasta oo tartan ah, oo bixiya barnaamijyo turjumaad qaabaysan oo aan lahayn mashruucyo uguyar, iyo xulashooyinka ugufiican ee tarjumaadaha tarjumida oo yareyn kara kharashka tarjumaadda illaa 50 %.
Smartling Tarjumaadda Kumbuyuutar-Caawinta ah (CAT)
Nidaamka tarjumaadda dhabta ahi wuxuu ka dhacayaa isla gudaha Smartling, oo leh qalab kumbuyuutar lagu caawiyo (CAT). Smartling's CAT, Muuqaalka Muuqaalka waxaa marwalba la siiyaa turjubaano, oo u suurta geliya turjumaanada inay si sax ah u fahmaan waxa ay ka turjumayaan, iyo sida ereyadoodu ugu habboon yihiin macnahaas. Markii tarjumaadda lafteeda la dhammaystiro, turjubaannadu waxay dhaqso ugu dhaqaaqi karaan hawsha xigta iyada oo ay ugu wacan tahay marin otomaatig ah.
Smartling wuxuu kaloo ka shaqeeyaa sidii shaqada turjubaanka aadanaha looga dhigi lahaa mid fudud sida ugu macquulsan sidoo kale, mahad waxaa leh:
Muuqaalka Muuqaalka - Translators shaqadooda ku eegaan karaa live, on qaab kasta
Xusuusta Tarjumaadda waqtiga dhabta ah
Xakamaynta Nooca - Kaliya waxyaabaha cusub ee la soo rogay ayaa loo tarjumay turjumaadaha, halka wixii hore loo turjumay xusuusta Smartling
Hantida Calaamadaha - Kheyraadka loogu talagalay tilmaamaha iyo tilmaamaha astaanta
Jeegaga Tayada isku dhafan - Jeegaga tayada-waqtiga dhabta ah waxay kaa caawinayaan badbaadinta waqtiga aqrinta
Maababka Gaabanaha - Waqti ku badbaadi fal kasta
Isku Xidh Xariga - Isku dar qaybaha leh hal qodob oo keliya
Qabashada Tag debecsan - Waxay uga faa'iideysataa barashada mashiinka inay si sax ah u dhigto taaga
Marin otomaatig ah - Smartling wuxuu hayaa nuxurka socodka, wuxuuna si otomaatig ah u maraa tarjumaad dhameystiran tallaabada xigta
Adoo si toos ah ula falgalaya howlaha jira iyo aaladaha jira - tusaale ahaan, u soo gudbinta waxyaabaha ku jira CMS - Smartling waxay u saamaxdaa isticmaaleyaasha inay otomatig ka dhigaan geedi socodka oo dhan agagaarka tarjumaadda dhabta ah. Smartling wuxuu awood u leeyahay inuu dhexgalo waxkastoo ku saabsan barxad ama qalab kasta oo sumaddaadu horey u isticmaalayso:
Maareeyaha Khibrada Adobe
Suuqgeynta Suuqa iibinta
Hogaamiyaha turjumida daruuraha, Smartling wuxuu qabtaa hawl kasta oo laxiriira hanaanka tarjumaada, isagoo kusameynaya macmiil la adeegsan karo oo macaamiishiisu u adeegsadaan inay ku dhex wataan hal abuurnimo dhexdooda ah. Waad ku mahadsantahay Muuqaalka Muuqaalka iyo liistada adag ee astaamaha otomatiga, macaamiisha waxay ogaadaan tarjumaadaha qiimaha-wax ku oolka ah ee tayada ugu sareysa, waqti yar.
Dunida Ku Dhaqaaq Erayo
Sannadkan, Smartling wuxuu soo saaray olole cusub oo suuq-geyn ah oo loogu magac daray Ku Dhaqaaqa Dunida Eray. Tani waxay ku bilaabatay fikradda ah inay jiraan dad ka dambeeya wax kasta oo ay shirkaddu u qabato macaamiisha: turjubaano. Marka kooxdu waxay shaqaaleeyeen sawir qaade u kicitimay safar caalami ah si uu u diiwaangeliyo nolosha iyo sheekooyinka 12 Smartling turjubaan oo ku nool adduunka oo dhan. Sheekooyinku waxay ku soo ifbaxeen Nolosha Dunida ee leh buugga miiska qaxwaha ereyada hadda la heli karo.
Shirkadaha doonaya koritaanka iyo guusha adduunka waxay sii wadaan inay daneynayaan dalabkeena. Kaliya maahan macaamiisheena cusub dhibco sharaf leh, laakiin kor u kaca weyn ee NPS macnaheedu waa sida ay u muujineyso macaamiisheenna hadda inay haystaan ​​khibrada ugu wanaagsan ee Smartling. Waxay noo sheegaysaa inaan fulinno ballanqaadyadeenna macaamiisha markay timaaddo bixinta khibrad heer sare ah oo xagga deegaanka ah oo leh tikniyoolajiyad cusub oo tarjumaad iyo turjubaanno ay macaamiisheenu garanayaan oo ay ku noqdeen ballaadhinta kooxdooda. Midkoodna ma jiri lahayn
Smartling la aasaasaha iyo agaasimaha guud, Jack Welde
Jadwal Demo Smartling ah
Tags: Maareeyaha Khibrada Adobegfpmadal ku habboon adduunkatarjumaadda aadanahaibm watsonTarjumaadda Luqaddaturjumaadda mashiinkaluuqad badankhibrad sumadeedluqadda hooyoluqadda dabiiciga ahtarjumaad dabiici ahxariifnimotarjumaadaisku xiraha tarjumaaddamadal turjumaadturjubaanada
Toosi WordPress cinwaanka